Chọta ọdịiche dị na ala zoro ezo, egwuregwu egwuregwu egwuregwu ọhụrụ | Gam akporosis
Zoro ezo ala bụ ihe omimi ọhụụ ọhụụ maka gam akporo (ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụ ụtọ ule na-acha odo odo), nke ị ga-ahụta ọdịiche dị n'etiti ụwa 3D abụọ dị n'ihu gị.
Ezigbo egwuregwu Ezubere na 3D na ụwa ndị a dọtara nke ọma na nke anyị ga-achọta ihe efu na otu. Ọhụrụ ọhụụ na-atọ ụtọ, mana nke enwere ike ịmata nke nta nke nta site na ihe ole na ole anyị ga-ahụ na ụwa ndị ahụ. Ka anyi jiri egwuregwu ohuru ohuru a bia ya.
1 Chọta ihe dị iche
2 N'ime ọrụ 100 na ala zoro ezo
3 Egwuregwu iji mee ka ọ dị mfe
Chọta ihe dị iche
Egwuregwu a nwere ike cheta akụkụ ndị ahụ na akwụkwọ akụkọ ọtụtụ afọ gara aga nke ha gosiri gị eserese nke ị ga-ahụ ihe dị iche na otu na nke ọzọ. Ihe ntụrụndụ na-atọ ụtọ iji wepụta oge yana na ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ na mkpanaka gị na nnukwu ọdịiche dị na visual ekele maka ndịna-emeputa.
UZO Zoro ezo na-etinye anyị tupu usoro nke usoro abụọ nke ụwa abụọ yiri nke ahụ, mana nke otu n'ime ha na-efu 4 ma ọ bụ 5 ihe. Ihe ndị a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na ọta nke scarecrow ruo na epupụta nke osisi.
Nke ahụ bụ, na otu nke ụwa ị ga-ahụ osisi jupụtara na akwụkwọ ndụ, na nke ọzọ n’ala ọzọ n’ala na-adịghị. Nke kachasị, anyị nwere ike mbugharị ma tụgharịa igwefoto iji chọta nkọwa efu, yabụ n'echiche a ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
N'ime ọrụ 100 na ala zoro ezo
Na ngụkọta anyị ga-enwe a usoro nke 100 ọzọ anyị nwere ike ịga site na mmepe ha n'ụzọ na-abụghị usoro. Nke ahụ bụ, site na ọkwa ụfọdụ ụzọ dị iche iche ga-adọta ruo ịmara 3 oge ochie.
Ọ bụ n'echiche a ebe UZO NZUZO na-egwu egwu iji chọpụta obodo ndị ahụ maka imepụta menu nke ọma iji mepụta ikuku dị mma.
Ekwesịrị ikwu ya Zoro ezo N'ala na-enyekwa ka igwu egwu enweghi ngwụcha. Na site na ihe anyi puru ighota, o bu n’ihi na a n’ekereghi ha. Anyị ga-ahụ otu ha ga-adị mgbe anyị nwere ọganiihu nke ukwuu ma hụ na akụkụ nke egwuregwu ahụ agwụla.
Egwuregwu iji mee ka ọ dị mfe
UZO ZO na-akpọrọ anyị gaa ebe izu ike na ọdịmma Ha bụ ihe dị mkpa dị ka ihe ngọpụ iji jide ụfọdụ ekweisi, tụba onwe anyị n'ihe ndina ma nwee obere ntụrụndụ. Ọ bụkwa ihe ọzọ dị mkpa e ji mara ya.
Anya bụ nke ọma e mere ha na-egosipụtakwa ụwa ndị ahụ na 3D na anyị nwere ike ịtụgharị dị ka anyị chọrọ, ma ọ bụ gbasaa iji hụ nkọwa nke ụwa ma ọ bụ ụwa ọzọ. Egwu ahụ na-enyere aka ịtọ ọnọdụ na menu ndị kachasị elu na-egwukwa na ọkwa dị mma.
Zoro ezo ala dị n'efu nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ na-achọ ọdịiche dị n'etiti ụwa abụọ na-abata n'uche. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ izu ike, echefula oge atọrọ na egwuregwu ọhụrụ a maka gam akporo.
Ntụrụndụ nke aka nke egwuregwu a nke ị ga-ahụ ọdịiche dị n'etiti ụwa abụọ.
Enweghi ngwụcha ọkwa
Ezigbo ihe eji eme ya nke nwere mmetuta mara mma
Ekwentị anyị nwere ike ịnata 3D
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Chọta ọdịiche dị na mgbaghoju anya visual zoro ezo ala maka gam akporo